Tora Zvitupa Zvako Zvekupedza Kudzidza Nhasi »Hodges University - Admissions
Categories: Zvitupa zveGiredhi, Izvo chete Chokwadi
Sarudza Yako Yekupedza Chitupa Chirongwa
Cybersecurity Graduate Chitupa
Chitupa cheCybersecurity chitupa che 18 chikwereti cheawa chinogona kuzadzikiswa mumasemita maviri. Inobatanidza yakafara ruzivo system misoro senge Strategic Management yeIT Maitiro uye IT Maitiro iine yakanangana necybersecurity misoro senge Kuchengetedzwa Kuteerera, IT Kuchengetedzwa Kudzivirirwa, uye Yepamberi Forensics. Chitupa ichi chakagadzirirwa avo vanoshuvira kunyanya mukuchengetedzwa kwepamberi pabasa ravo. Pamusoro pezvo, ichi chitupa chinogona kugadzirira avo vanoda kudzidzisa cybersecurity padanho rekoreji. Iko kune zvinodiwa zvekutanga pachirongwa ichi, kusanganisira bachelor's degree.
Dhatabhesi Management Chitupa
Iyo Dhatabhesi Management Chitupa inosanganisa yakafara ruzivo masisitimu misoro senge IT Management Maitiro uye Strategic Management ine yakatariswa dhatabhesi manejimendi misoro senge Dhata Warehouse uye Sarudzo Sisitimu Yekutsigira uye Dhatabhesi Kuchengetedza uye Kuongorora. Chirongwa ichi chinokugonesa iwe kufambira mberi mukati memunda wako wazvino kana kuti kugadzirira zvirinani kune rako basa shanduko uye inogona kupedzwa mumasemita maviri. Iko kune zvinodiwa zvekutanga pachirongwa ichi, kusanganisira bachelor's degree.
Kusiyana, Kuenzana uye Kuisirwa Chitupa Cheutungamiri
Iyo Diversity, Equity uye Inosanganisa Hutungamiri hwekupedza kudzidza ndechevaya vanoshuvira kudzidza kushandura nharaunda dzebasa nekusimudzira misiyano nekusimudzira kubatanidzwa. Iyi purogiramu yakagadzirirwa manejimendi uye Executive-chikamu chevashandi uye inogona kutorwa iri yoga kana yakafanana nedhigirii raTenzi. Iko kune zvinodiwa zvekutanga pachirongwa ichi, kusanganisira bachelor's degree.